Ikona enemibala inomnyango wabucala kunye nebhafu!
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguPat
Ikona enemibala ikwigumbi labucala elibekwe ngasemva kwendlu yam kwindawo yokuqala yase-Eureka. Igumbi linomnyango wabucala osemva kweyadi, kunye nebhafu eqhotyoshelweyo. Ndinikezela ngengeniso engenasitshixo ukuze kube lula. Iindwendwe zingonwabela idesika encanyathiselweyo ngaphandle kwegumbi kwaye ziphumle kwiyadi enemibala ephumlileyo. Igumbi ligqabhukile lombala ngokuchasene neentsuku ezingwevu eHumboldt. Igumbi kukuhamba okufutshane ukuya kwi-zoo, iindlela zokuhamba, izibhedlele, iivenkile kunye neendawo zokutyela.
Izinto ezintle ziza kwiipakethe ezincinci! Ndihlala kwindawo yokuqala e-Eureka. Igumbi leendwendwe, nangona lincinci, lifanelekile kumntu omnye kwaye likhululekile kubini. Ubomi bufutshane kakhulu kwiindonga ezimhlophe! Ndandifuna ukuba indawo yam ibe yodwa, yonwabe, kwaye iveze ubuntu bam. Ndiyathemba ikwenza uncume!
Igumbi linebhedi egcweleyo, i-cable tv, i-mini frig, i-microwave, i-keurig, kunye nezitya zokulula kwigumbi lokutyela. Ndibonelela ngekofu, iti, i-cocoa eshushu, amanzi asebhotileni kunye nemivalo yegranola ukuze uqalise usuku lwakho. Ndikwabonelela ngeshampu yokuhlamba umzimba, iitawuli, isomisi, intsimbi kunye nezinye izinto ezibalulekileyo zokuhamba onokuthi uzilibele. Kukwakho nesifudumezisi sendawo kubusuku obupholileyo esifudumeza indawo encinci ngokukhawuleza!
4.96 · Izimvo eziyi-413
Ikhaya lam likwindawo ezolileyo, esekiweyo nenqwenelekayo kwimpuma ye-Eureka. Ndiyakuqinisekisa ukuba uya kuba nokuhlala ngokuzolileyo nangokuzolileyo. Uninzi lweendawo zokutyela kwidolophu endala zihamba ngemizuzu emihlanu ngokukhawuleza. Kukho neendawo zokutyela ezininzi ngaphakathi kohambo lwemizuzu eli-15 ukusuka endlwini yam. Ukuba ujonge ukuba senzulwini yobusuku bobomi kunye neendawo zokutyela, ikhaya lam aliyi kuba yeyona ndlela ilungileyo.
Ndisebenza ngokusisigxina kodwa ndisoloko ndifumaneka ngokubhaliweyo, ngomnxeba okanye nge-imeyile. Ndiyakonwabela ukudibana neendwendwe zam kodwa ndiya kukunika lonke ubumfihlo obufunayo.